2021-10-24 @ 23:45 in Ankapobeny
Adihevitra iray mandeha amin’izao fotoana izao eto Madagasikara ny volavolan-dalàna iray izay tonga dia raisin’ny maro ho fanalan-jaza na dia misy anarany amin’ny teny frantsay aza. Efa nisy ny volavolan-dalàna natolotra mitovitovy amin’izany ihany dimy taona na mihoatra izay teny amin’ny antenimieram-pirenena fa tratran’ny fandavana moa araka ny resaka ao amin’ny media sosialy ao. Nanana ny lazany, indrindra fa tany Frantsa izay tahafin’i Madagasikara matetika, izany « Interruption Volontaire de la Grossesse » izany… fa ity tsy neken’ny maro teto. Ankehitriny kosa indray dia volavolan-dalàna mametraka ny anarana teny frantsay manao hoe « Interruption thérapeutique de la Grossesse».
Ny Fiangonana Kristiana maro eto Madagasikara amin’ny alalan’ireo mpitondra fivavahana ao aminy dia mirona avy hatrany amin’ny fanoherana ny fanalan-jaza. Safidy sy faharesen-dahatra izany fa ny soratako etoana kosa indray dia fampisainana hoe mifanaraka amin’ny filazantsaran’i Kristy tokoa ve ny ampianarina na ny torian’ny Fiangonana eto Madagasikara, indrindra fa amin’ity lafiny iray ity? Tsy hanamarina na handiso izay atao sy lazain’ny Fiangonana aho fa hevitro fotsiny ny hoe anisan’ny asan’ny Fiangonana ny mamory ireo very na voahilikiliky ny fiaraha-monina sy ny hitaiza azy ireny tsy hamerina intsony ny fahadisoany.
Endrika idealin’ny ankohonana ny fisian’ny ray sy ny reny ary ny zanaka fa betsaka anefa ireo ankohonana no banga ny iray amin’ireo toko telo ireo : misy ny ankohonana tsy misy ray, misy ny ankohonana tsy misy reny ary misy ny ankohonana izay mpivady ihany no mandrafitra azy fa tsy manan-janaka ry zareo. Ny betsaka indrindra amin’ireo dia ny ankohonana tsy misy ray, sady voasakana tsy hanana andraikitra ao am-piangonana matetika ilay reny tsy manambady ara-dalàna… na tratran’ny fahamenarana ka tsy miditra am-piangonana intsony raha tsy hoe misy fiangonana mitory ny filazantsara amin’ny toerana iray vao nidirany ka mandray ireo mangetaheta ny teny sy ny sitrapon’Andriamanitra.
Lava izay voasoratra izay fa misy tantara izay ao amin’ny filazantsara ao, Jaona 8 :1-11 no misy azy mazava tsara. Tantaran’ilay vehivavy lazaina ho azo olan-tanana nijangajanga, izany hoe raha lazaina manta sy tsy ankifidy teny dia vehivavy tratra niray tamin’ny lehilahy tsy vadiny nentin’ny Fariseo sy ny mpanora-dalàna ho eo amin’i Jesoa mihitsy hitsapany ny heviny. Mariho mazava tsara ireto zavatra manaraka ireto :
Voalohany, nandritra ny fotoana nampianaran’i Jesoa no tonga avy any ireo mpahay ny lalàna (izay azo lazaina hoe mpahay Soratra Masina raha amin’izao fotoana izao) ireto. Tapaka izany ny fampianarana nataon’i Jesoa tamin’ny vahoaka tao an-tempoly fa teren’ireto olona ireto hamaly izay tokony atao amin-dravehivavy i Jesoa.
Faharoa, ravehivavy no azo fa lasa aiza ralehilahy ? Ahoana no ilazana fa tratra nijangajanga izy nefa tsy nisy lehilahy na olona hafa tratra niaraka taminy nanao izany fijangajangana izany ? Sa, sao dia bevohoka tsy manambady ary ravehivavy ka ny vohoka nentiny no porofo iampangana azy ho nijangajanga ? Dia tsy nitady hevitra hanesorana ny zaza ve ravehivavy rehefa hitany fa bevohoka izy ? Aoka atao mazava tsara fa tsy misy filazana hoe bevohoka izany mihitsy ny lahatsoratra tondrointsika eto fa faminavinana fotsiny izany noho ny tsy fahitana sy ny tsy fahafantarana hoe iza ilay lehilahy niaraka taminy (na mety ho nahabevohoka azy).
Fahatelo, niondrika i Jesoa ary nanoratra tamin’ny rantsa-tanany ny tany teo anoloany nandritra ny fotoana nitenenan’ireto olona nitsapa na nanadina azy ireto. Inona no dikan’io fihetsika io ? Soraty ho lalàna izay ambarako etoana ? Mieritreritra izay holazaina ? Avy eo izy nitraka dia niteny hoe « izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato azy voalohany » ary dia niverina niondrika izy ka nanoratra indray.
Manaraka, niala tsikelikely nanomboka tamin’ny zokinjokiny ka hatramin’ny zandrizandriny ireo olona tonga hiampanga ilay vehivavy satria samy nanota daholo, tsy nisy na iray aza afaka nitoraka ilay vehivavy voalohany. Efa nanota na dia ny mpahay lalàna sy mpanora-dalàna sy izay miseho masina aza. Feno fihatsaram-belatsihy ry zareo nanatona an’i Jesoa saingy niala maina rehefa tratra tamin’ny laingony : Samy manam-pahotana avokoa fa matoa ny zokinjokiny no niala voalohany dia satria mahatsapa ihany ao anatiny ao fa be fahotana. Ny zandriny kosa indray sakodiavatra satria ny mety ho mpitarika no niala mialoha.
Tohiny, hoy i Jesoa tamin’ilay vehivavy « Izaho tsy manameloka anao ». Nahoana izy no tsy manameloka ? Izay rehetra miseho mahalala ny Soratra Masina sy mahalala an’i Jesoa dia tokony hahafantatra fa (farafaharatsiny eo anatrehan’i Josefa izay lasa tondroina ho rainy nefa mahafantatra tsara fa tsy rain’ny zaza izy) dia zaza tsy manandray izy (eo amin’ny Fiarahamonina raha tsy nozanahin’i Josefa), ary bevohoka azy tsy anatin’ny fanambadiana ara-dalàna (fa vao mifamofo) ny reniny.
Ny tantaran’ny Fiangonana anefa tsy hahitana loatra ny fiahiana ny zaza tsy manan-dray fa feno tranga kosa amin’ny fanilihana ny vehivavy tsy manambady nefa nisafidy ny hiteraka sy hamelona ny zanany. Zary voaheloky ny Fiangonana miseho ho masina ilay vehivavy nolazain’i Jesoa hoe « izaho koa tsy manameloka anao ». Tsy hitan’ny Fiangonana na iniana tsy fantarina anefa izay lehilahy nahabevohoka ilay vehivavy dia toa mitovy amin’ireto nataon’ny Mpanora-dalàna sy ny fariseo ka ny vehivavy ihany no ampangaina (mety noho ny vohoka no porofon’ny fijangajangany). Fa mifanindran-dalana amin’izany, odian’ny Fiangonana (andeha atao hoe sasany) tsy fantatra na tsy resahana ireo fantatra ihany fa bevohoka saingy nanala zaza noho ny henatra.
Fehiny, tsy misy mihitsy hatreto fanamelohana na fiarovana ny fanalan-jaza fa ny antony iray mety ho mahatonga ny fanalan-jaza no voalaza. Arovan’ny Fiangonana sy sahaniny amin’ny tsy fanilihana mivantana na ankolaka ve izay vehivavy niteraka tsy manambady satria na Jesoa aza tsy manameloka azy raha ny hita ao amin’ny Jaona 8 :11b ? Koa raha tsia no valin’io fanontaniana eo ambony io dia inona no tanjon’ny Fiangonana manameloka ny « fanalan-jaza amin’ny endriny rehetra » nefa tsy anontaniana ny heviny ny amin’izany izy ? Mariho tsara ny tantara fa tsy i Jesoa no nisolantsolana nanakana ireo mpanora-dalàna sy fariseo tsy hitoraka ilay vehivavy fa ry miseho ho masina no nanapaka ny fampianaran’i Jesoa tamin’ny vahoaka. Dia tokony haka tahaka ny nataon’i Jesoa koa ny Fiangonana. Hanamelohanareo ahy ve izay voasoratra rehetra izay ?